Realme 5 Pro waxay la imaan doontaa kamarad afar geesood ah oo 48 MP ah | Androidsis
Realme 5 Pro ayaa la xaqiijiyay inay la timid kamarad gadaal ah 48 MP
Waxaan ku sii wadaynaa wararka sawirada maanta. Horumarkii ugu dambeeyay, waxaan ku soo sheegnay taas Samsung ayaa ku dhawaaqday dareeraha kamaradda 108 MP ee ugu horreeya ee casriga ah, inkasta oo aysan kaliya ahayn tan koowaad ee buuggeeda, laakiin sidoo kale waa tan ugu horreysa adduunka. Illaa iyo hadda, ma jirto wax caddayn ah oo soo ifbaxay oo noo sheegaya in shirkad kale - sida Sony, tusaale ahaan - ay ku shaqeyso muraayadda xallintaas.
Aaladda ugu dhow in la soo saaro waa Realme oo leh kamarad 64 MP ah, sida ku cad waxa shirkaddu dhowaan ku shaacisay a boodhadhka xayeysiinta. Laakiin Terminal kale ayaa sidoo kale jidka ku jira, kaas oo aan adeegsan doonin kamaradda Samsung 64-ka ah ee loo yaqaan Samsung, laakiin waa diaparador 48 MP ah, waana midda aan ka hadlayno tan xigta tan iyo markii la sheegay in dareeraha loo xaqiijiyay aaladda si rasmi ah.
Taxanaha shirkadda ee 'Realme 5' ayaa soo bixi doona 20-ka Ogosto. Tan waxaa hogaamin doona Realme 5 Pro, oo ah terminaal dhexdhexaad ah kaas oo aan ku siineynay culeyskiisa shaley a la soco oo aan ku dhajino dhammaan astaamaheeda iyo qeexitaankiisa illaa iyo hadda xaday. Qalabkan oo kale ayaa ah midka xambaari doona 48 megapixel shooter oo ku dhejin doona qeybta dambe. Intaas waxaa sii dheer, muraayadaha indhaha waxaa wehlin doona seddex kale qaybtiisa sawirada, marka waxaan wajaheynaa a dhexdhexaad leh kamarad afar gees leh.
Saaxiibbada kale ee kaamerada 48 MP waa a kamarad xagal ballaadhan leh, hal super macro iyo hal sawirro ah. Kaamiradda aadka u ballaaran ayaa leh aragti muuqaal ah oo 119-degree ah.; muraayada 'super macro lens' waxay la socotaa dherer dhan 4cm oo kuu ogolaanaya inaad toogato waxyaabaha u dhow; halka muraayadaha sawirka ee Realme 5 Pro, sida magaca ka muuqata, ay tahay inuu ku dhasho sawirro fiiqan oo cad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme 5 Pro ayaa la xaqiijiyay inay la timid kamarad gadaal ah 48 MP
Meizu 16s Pro wuxuu horey u lahaa taariikh rasmi ah oo la bilaabi doono
TomTop heshiisyadii ugu fiicnaa ee ku saabsan qalabka casriga ah